ICO OpenLedger စျေး - အွန်လိုင်း ICOO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ICO OpenLedger (ICOO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ICO OpenLedger (ICOO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ICO OpenLedger ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $35 398.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ICO OpenLedger တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ICO OpenLedger များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ICO OpenLedgerICOO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0922ICO OpenLedgerICOO သို့ ယူရိုEUR€0.0782ICO OpenLedgerICOO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0706ICO OpenLedgerICOO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0841ICO OpenLedgerICOO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.832ICO OpenLedgerICOO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.582ICO OpenLedgerICOO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.06ICO OpenLedgerICOO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.345ICO OpenLedgerICOO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.123ICO OpenLedgerICOO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.129ICO OpenLedgerICOO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.06ICO OpenLedgerICOO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.714ICO OpenLedgerICOO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.501ICO OpenLedgerICOO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6.91ICO OpenLedgerICOO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.15.57ICO OpenLedgerICOO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.127ICO OpenLedgerICOO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.14ICO OpenLedgerICOO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.88ICO OpenLedgerICOO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.642ICO OpenLedgerICOO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥9.76ICO OpenLedgerICOO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩109.6ICO OpenLedgerICOO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦35.66ICO OpenLedgerICOO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6.79ICO OpenLedgerICOO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.56
ICO OpenLedgerICOO သို့ BitcoinBTC0.000008 ICO OpenLedgerICOO သို့ EthereumETH0.000233 ICO OpenLedgerICOO သို့ LitecoinLTC0.00159 ICO OpenLedgerICOO သို့ DigitalCashDASH0.000944 ICO OpenLedgerICOO သို့ MoneroXMR0.000988 ICO OpenLedgerICOO သို့ NxtNXT6.45 ICO OpenLedgerICOO သို့ Ethereum ClassicETC0.0132 ICO OpenLedgerICOO သို့ DogecoinDOGE26.21 ICO OpenLedgerICOO သို့ ZCashZEC0.000967 ICO OpenLedgerICOO သို့ BitsharesBTS3.51 ICO OpenLedgerICOO သို့ DigiByteDGB3.17 ICO OpenLedgerICOO သို့ RippleXRP0.312 ICO OpenLedgerICOO သို့ BitcoinDarkBTCD0.00313 ICO OpenLedgerICOO သို့ PeerCoinPPC0.307 ICO OpenLedgerICOO သို့ CraigsCoinCRAIG41.39 ICO OpenLedgerICOO သို့ BitstakeXBS3.87 ICO OpenLedgerICOO သို့ PayCoinXPY1.59 ICO OpenLedgerICOO သို့ ProsperCoinPRC11.4 ICO OpenLedgerICOO သို့ YbCoinYBC0.00005 ICO OpenLedgerICOO သို့ DarkKushDANK29.13 ICO OpenLedgerICOO သို့ GiveCoinGIVE196.6 ICO OpenLedgerICOO သို့ KoboCoinKOBO20.36 ICO OpenLedgerICOO သို့ DarkTokenDT0.0849 ICO OpenLedgerICOO သို့ CETUS CoinCETI262.13